Lithetha ntoni igama lokugqibela elingu-West?
Isibongo seNtshona sasixhaphazwa kumntu "osentshonalanga" -yomnye owayefudukela kwindawo engasentshonalanga, okanye ohlala kwintshona yedolophu okanye idolophana. Amagama amaninzi afana neNtshona, Westerman kunye neWestray.
Igama elongezelelweyo Ukuchongwa : WESTE
Igama lomthombo: isiNgesi , isiJamani
Kuphi kwihlabathi Ngaba abantu abaneSurname ye-WEST Live?
Ngokutsho kwedatha yokuhanjiswa kwegama kwi-Forebears, iWest ininzi kakhulu e-United States apho ihamba njengegama le-107 eliqhelekileyo kwisizwe.
Kwakhona ifani eqhelekileyo eNgilani (ibanga eli-111), e-Australia (131st) naseNew Zealand (152nd). Ngaphakathi kweNgilani, iWest isoloko ifumaneka eBuckinghamshire, eSussex naseKent, ilandelwa yiLincolnshire, eBerkshire, eOxfordshire, eSierrey naseLeicestershire.
I-WorldNames PublicProfiler ibonisa ukuba ngaphakathi kwe-United Kingdom isibongo seWest siqhelekile kwi-Aberdeenshire, eScotland, kunye ne-Isle yeWight kunye neyona nkoliso yaseNgilani. EUnited States, iWest ixhaphake kakhulu eMzantsi kwinqanaba laseVirginia ukuya e-Oklahoma, ngakumbi i-Georgia, iTennessee, i-Mississippi, i-Arkansas, i-Oklahoma ne-Virginia. I-West nayo ifani eqhelekileyo kwiNorthern Territory yase-Australia.
Abantu abaPhezulu ngeWest Last Name
UBilly West - umvelisi wefilimu othulileyo kunye nomdlali
Cornel West - umbhikisho wezopolitiko kunye nomlobi
Umfundi weBenjamin West- waseMerika oza kuvela kwiinkalo zonqulo nezembali
Indawo yaseWest West - yaseMerika kunye nomdlali wefilimu
UJastern West - waseMelika kunye nomqambi
UKayne West - waseMelika owe-hip hop
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name
Funda indlela yokuphanda umthi wakho wesiNgesi ngesiqhotyoshelwano kwiirekhodi zoobuhlanga e-England naseWales. Kuquka iinkcukacha kwiirekhodi zombini kunye nakwi-intanethi kubandakanya ukuzalwa, umtshato, ukufa, ubalo lwabantu, iirekhodi zempi kunye neendawo.
IWest Surname Project DNA
Abesilisa abanefayili WEST, okanye ifani ehambelanayo okungenzeka iguquke ukusuka okanye iya eWest (Westerman, Wieste, Western, Westh, njl.) Bakhuthazwa ukuba bajoyine le projekti ye-DNA ijolise ekuhluleni iindlela ezahlukeneyo zeentsapho zaseNtshona.
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto into enjengentsapho yaseWest okanye ingubo yeengalo kwiPrenti. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
IWorld Family Genealogy Forum
Khangela le bhansela elithandwayo lokuzalwa lomnxeba we-West ifowni ukufumana abanye abangaphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho wobuNtshonalanga.
Uhlobo lweNtsapho - Ulwalamano lwaseWest
Hlola iirekhodi ezingaphezu kwezigidi ezi-4 ezichazela abantu abanegama le-West, kunye nemithi yentsapho yaseNtshonalanga kule webhusayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Latter-Day Saints (i-Mormon).
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho, kunye nezinye izibonelelo kubantu abathile abanegama leNtshona, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
DistantCousin.com - I-WEST Genealogy & Imbali Yentsapho
Hlola inani leenkcukacha zoluntu zamahhala kunye neefayile zodidi lwegama lokugqibela eNtshona.
IWest Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwimithi yentsapho kunye neengqungquthela kwiirekhodi zomthonyama kunye neembali zabantu ngabanye abanegama lokugqibela eNtshona ukusuka kwiwebhusayithi yeGenealogy Today.
Inomic Number Inkcazo
I-Faire d'un pierre ezimbini zokubetha
I qué familiares ikwazi ukuhamba i-permanent residence
Indlela u-Akazikazi e-Athena wamnceda ngayo iHercules
I-Best Danny Elfman Soundtracks
Hashshashin: AmaPersi abulala